Nezvedu - Xinxiang Zhengyuan Kugadziriswa Technology Co, Ltd.
Xinxiang Zhengyuan Kugadziriswa Sayenzi uye Tekinoroji Co, Ltd ndeye yakanyatsogadziriswa yepamusoro-bhizinesi bhizinesi ne 1 uye 2nd -class yekumanikidza chikepe dhizaini uye rezinesi rekugadzira, kuita mukutsvagisa nekugadzira yakakwirira-kumagumo simbi midziyo yekugadzira, zvigadzirwa zvemitambo masisitimu, kumanikidza ngarava, maitiro achiri, shongwe, uye zvimwe zvigadzirwa zvakagadziridzwa.
Zhenyuan anokodzera ISO9001: 2008 Quality Management System, iyo ISO14001: 2015 Environmental Eanagement System, uye iyo OHSAS18001: 2007 Occupational Health uye kuchengetedza Yekutevera Ongororo. Zhengyuan inhengo yekomiti ye "National technical Committee yeParticle Characterization uye Screening Standardization" (SAC / TC168) uye "National technical Committee yekumisidzana kweSecurity Machina" (SAC / TC92). Chiziviso chayo, "ZYstar", yave inozivikanwa mukurumbira muindasitiri.
Zhengyuan akagadzira mubatanidzwa wenguva refu nemayunivhesiti mazhinji uye masainzi ekutsvagisa sainzi. Izvo zvakaunganidzawo boka revanyanzvi vekuchenesa feki, vekare R&D uye vanjiniya vekushandisa uye mamwe matekinoroji akakosha, ari mu R&D yemagetsi anoponesa petrochemical zvishandiso uye tsvagurudzo yekutsvagisa uye kushandiswa kwetekinoroji yekuchenesa, uye nekupa yekucheka-kumucheto kwehunyanzvi hwekutsigira chigadzirwa. dhizaini uye kugadzira.
Zhengyuan yakatsaurira musangano wekuchenesa uye makamuri ekushandira ane michina yepamusoro pamwe neyekutarisira nzira, ayo anokwanisa kuitisa kuyerwa kwemidziyo yemafirita uye kuchenesa kwemvura, kuongororwa kwekusvibisa, uye muyedzo wekuita kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvekuchenesa, uchipa vimbiso yakavimbika yeimba yechigadzirwa. Nesimba rayo rakasimba rehunyanzvi, michina yepamusoro yekugadzira, yakakwana uye yakakwana nzira yekutarisa uye kurira nzira uye yeinosimbisa sisitimu, Zhengyuan inovavarira kugovera zvigadzirwa zvakasimba uye zvinoshanda uye zvinetso zvinotarisana nematambudziko kune vatengi vayo.